January 18, 2021 Xuseen 14
Puntlandtimes (Qardho)-Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa si adag uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee ay xilligaan ku sugan tahay Soomaaliya iyo dibu-dhacyada doorashooyinka barlamaanka iyo madaxtinimada.
Madaxweyne Deni, wuxuu sheegay in dalku ku sugan yahay marxalad xasaasi ah loona baahan yahay in la helo doorasho laysla ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacda, isagoona tusaale u so qaatay doorashooyinkii ka qabsoomay Puntland iyo sidii xilliga loogu ilaaliyey.
“Waxaad ogtihiin madaxweynihii 6aad baan ahay ee Puntland soo mara, marka laga tago Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo madaxweyne Maxamed Cabdi Xaashi oo muddo yar joogey afarta kale giddigood waxaa la doortay 8 Janaayo marna kama dib dhicin marna kama hordhicin, middaasna mahaddeeda waxaa leh shacabka Puntland oo waqtiga ku ilaaliyey” ayuu yiri madaxweynaha Puntland.
Madaxweyne Deni, wuxuu sheegay in dhabar adayg loo sameeyo marxaladda hadda lagu jiro,”Caqabaduhu waa imaanayaan, in loo dulqaataa la rabaa, waxaa la rabaa si sax ah in lagu soxo, waxaan rajaynaa in Soomaaliya 2021 inuu ka dhoco isbedel wanaagsan oo horumar ino horseeda”.
Nin buuran oo CAQLI BADAN waligay ma arag. Puntlandbuu ku wareeray ma SOMALIA WAX KA QABAN KARAA. DIIWAANGALINBAA KA SOCOTA MEEL 10 KM U JIRTA OO WAXBA KA QABAN KARIN. AABE KAN YAR IGA CELI KAN WAYN AAN ISKA CELIYEE. MASKIIN MACAL WEYN.
Maseerku waa xaran
Mohamed Nugaa, inangumeed xun oo daciifa dhulkiisiina lahaayaa tahaye dhuusada ka daa Boqorka, waa wiil taagtay 3000 km oo barwaaqo ah ka arimiya, adiguna waxaad caashaqsantahay ini farmaajo oo ugandise villa wardhiiglay ku waxeeyaan.
Mohamed nugaal, meesha 10km u jirta Garowe dadkii lahaa ee harti waqooyi ayaa jooga awal ayaka ayaa joogay iidoor iyo snm shaqo kuma leh, puntland qorshaheedu maahan inay harti waqooyi dhulkood ku layso,ujeedka ugu wayn ee snm ayaa ah in puntland dhulbahante dhulkiisa jooga birta ka asasho mana dhacayso.
Xaalka runta ah ee somali u baahantahay waa kan.
Runta hadii aan la eego oo aan lav xaqirahayn reer ayeeydey …. ayaga kaliya ayaa maanta isku haya somalia. La’aantoodna waa hore ayey SNM kala goyn lahayd somalia.
Shan Farcan ayey ayeeya-yaashay ahaayeen dhulbahante marka waad fahmi kadhaan in aan hiil iyo hooba ula taaganahay.
Inkastoo aan jeclahay in xuduuda puntland ay ku teedsanaato Yagoori ilaa iyo Xith iyo Mayd,
Laakiin daruufaha jira awgeed hadana diyaar ayaan u ahay in aan garab istaago SSC si ay u noqoto dowlad goboleed lamid ah puntland iyo somaliland si loo xaqiijiyo wada jirka dhuleed iyo dadeed ee somalia oona looga hortago qawleysatada geed dheer iyo ku gaaban u fuulay kala goynta somaalia.
Hadii Benadir noqon kadho ama lagu doodayo in ay noqoto dhowlad goboleed waa khasab in SOOL noqoto dowlad oo iyana SANAAG noqoto dowlad oo iyana jubaland noqoto labo dowladood oo kala ah Gedo iyo jubada hoose. Ayagay u jidhaa cida la haraysa magaca jubaland.
Arinkaanu waxuu sababayaa in somalia ka dhalato dheelitir siyaasadeed oo aan dhana u dheelinahayn.
Waan fahmi karaa hadii ay arinkaan dhibsadaan kuwa aanan meelaha dheer wax ka arkin, laakiin xaqiiqada muuqata ee aan la gafahayn ee mustaqbalka waa kan.
5 dowlad goboleed ee ah Daarood iyo 4 dowlad goboleed ee ah hawiye iyo raxanweyn iyo 2 dowlad goboleed ee ah Dirta waqooyi ah ee laga kala xukumi doono hargaysa iyo boorame. Waa hadii reer Awdal ay muran ka qabin in ay iskood isumaamulaan
Fikirkaanu ma aha fikir cudub. Daaha gadaashiisa ayaa looga doodayey mudo dheer.
Everyone is happy ever after—— willing or unwillingly.
Fool xumo boowe caqliyari ha ku darsan.
Meel Maxamuud Saleebaan ku habsaday ayuu leeyahay waa la isu bedbedelaa,wali Maxamed Cabdi Xaashi muddo yar buu joogay oo ayuu taddii buu khari gaaray waan iska saarnay.
Maamul jifo ayuu ku qaldayaa meel Somali oo dhan u ordayso
@ IBRAHIM, WAR DHAFOORBUU KU YAAL. FAAN WAXBA CID KAMA DHICIYO
Iska calaacal sidii Naagihii awoodkale markaad weydey.
Damiirxumadaadu iyo doqonimadaadu waxay ku siisay Inaad somaliland oo 1960th dal ahay oo xorumiyada qaadatay aad ku dheririso Tuulada Xun ee Shalay ee Dhabayacadu xaadhxaadhatay Doqon bilaa caqliya ma xishoode Munaafaq.
Waligiin runta is diidsiiya walee inaan laydinka neefin iska dhuus dhuusa yaa Dhabayac Muran Naagood.
Hadii waxyar oo caqliya kugu jiro tuuladaada ilaasho yaan iyada lagaa qaadin oo lagugu dhex aroosin ciidanka somaliland dushaada ayay ku hilib karsanayaan last 4years.kkkkkkkkkkkkk
TAKE EASY SAXIB
wax badso wax beel bay leedahay. Run ahaanti beeshaadu wey ku khasaarin aqoonsi raadinta. Bil xaqiiqa waxaa kheyrku ugu jiraa beeshaada in ay dhifaacdo somaliweynimo.
Ma isweydiisey waxa xigin marka aqoonsi dhaco. Mudo aan dheereyn aqoonsi ka dhib taladu way ka farabixin beeshaada.
Afarta beelood ee u weyn gayiga—— 3 wey is bahaysan, midna waxuu noqon madi laga awood iyo tiro badan yahay. taasu waa beeshaada. Waxaa kaloo meesha ka maqnaanahayn kuwa aad ugu yeerto dhabayaco oo garab iyo gaashaan u noqondoona 3da is bahaysatay ee aqoonsi kadib xukunka inkala wareegidoonta. Waxaa kaloo ciyaarta fara badan kula jirin Djibouti oo garab siindoonta reer Awdal oo kamid ah sadexda is bahaysatay. Sadexdu waa sool sanaag iyo Awdal iyo beesha siwaakhroon ee wax ka dagta Sanaag.
Waxaan la yaabanahay sababta ay beeshaadu ugu halgamayso in uu madax banaani helo wadan aysan Calfan Doonin. waxaan inkula talin in aad CPR-ka ku sii haysaan jamhadii SNM waayo waad u baahnaan doontaan mustaqbalka hadii aqoonsi dhaco.
Sida kaliya ee aad u heli kadhaan dhul aan muran ku jirin ee aad kaligiinnka atooreysaan waa idinkoo saadbuursiga joojiya oo dhulka aad leedihiin goaansada in aad goosataan. Waa xaqiiqo hadii aad saas sameysaan in Puntland noqonoyso dowlada ugu horeysa ee in aqoonsata. Waqooyi bari + jab ah togdheer + Jab ka mid ah sanaag.
Qof madhan baa tahay waxaan aad xar xariiqday ilmaha yar xitaa wuu kuqosli lahaa.
Bal umada u sheeg meesha dowlad aad puntland ku sheegayso, somaliland oo ah xoriyadii 5 somaliweyn aad kasoo qaaday waxaan jirinba kkkkkkkkk waar ma hadaad dhalatay xagaad kuu noolayd ma duurka.
Somaliland maaha mid maanta dhalatay taariikh dheer bay leedahay ama SNM ku sheeg Ama Iidoor ku sheeg ama dir ku sheeg,wax adiga iyo noocaagaas laga weyfmdiinaya adeer Ma JIDHO kk.
Adeer dalkan dhiig iyo dheecaan baa loo qubey ciyaar ciyaar naguma joogto Somaliland ragii xoreeyey waa joogaan iyo kuway sii dhaleen. Nacnac iyo hadal cantarabaqash ah lagama dhegeysto Waanu naqaan sida Cadowga Adhaxda looga jebiyo wixii idinka raacay taariikhda qoraysa markii aad isku daydeen inaad dhulka la boobi karo wixii ka dhacayna waa la ogyahay iyo jihaadkii lagaga Xoreeyey Faqash dhulka somaliland.
3reer aad sheegtay hadaad u jeedo dhulbahante iyo aroos iyo kan aad xaga danbe kaga lifaaqday shakaroon,waa wada somaliland horena u ahaayeen hadana u yihiin weligoodna ahaanayaan taa kubiyo cab.
Xaqiiqda iyo lama huraanka nina waxba kama bedeli karo waligaa qabyaalad ku meerayso sidaas ayay ahaaneysaa ilaa qiyaamaha.
3reer haday xukunka qsbtaan waa dalkoodiii xaqna way u keeyihiin waana geyaan inay Iidoor iyo somaliland oo dhana maamulaan waayo waa dad Wada Ehel iyo xigaal isu wada ah ilaahayna meel kuwada beeray.
Adeer somaliland dadkeedu way is huran yihiin wixii khilaaf ahna waa layska shaafiyaa iyadoo si calool fiyow yahay.
Munaafaqadiina iyo huuhaa iyo yaa reer hebelaay filmkaas waa laydinku bartay waana qarxay idiin shaqayn maayo beerlaxawsigii sheekadii Harti iyo Bla bla bla.
Somaliland ilaahay mahadii cirkaasay maraysaa wax u kordhay mooyee waxba kama xumaadaan waayo waa naga dhab inaanu ka dhabayno himiladeyada oo ah Qaran buuxa oo dunida kusoo biira oo la ictraafsan yahay lana yidhaahdo THE REP OF SOMALILAND.
Ama jeclow ama necbow xaduuda somaliland kess then 70km ayaa nooga hadhay inta hadhayna bi’itmilaah waa soo af jareynaa waqti aan fogeyn indhahaagana waad ku arki baroorta iyo ciilka iyo muusanowga sii diyaarso ileyn awoodaadu waa intaase kkkkkkk.
Kulahaa dhulka laydinka qaadayaa Waar sheekadii Afweyne ayaa weli kaa dhex guuxaysa Afweyne kumaydaan cimri qaadan sidii aanu u halaagney markuu dhulkayagii isku deyey inuu Cagdheer iyo Faqash iyo qashin ku wareejiyo, maxaase ka raacay in dhegta dhiiga loowada daray Daalimiintii Faqashta Xaaraan quutayaashii waanu ka adkaanay hash cad.
Waar waxba maba ogid iyo wixii lasoo maray sheeko caruureedka meesha hala iman.
Mar hadii aad aqbashay in lagu xukumo oo mustaqbalka noqotid raciyo hadee anigu taas muran kama qabo. Waaba sida aan awalba saadaalinayey.
Xoriyada into soo dadaji
Yaa wax hogaamiya ma minority mise majority.
Iidoor ilaah baa majority ka dhigay dhuloos iyo waroos waa reer somaliland, Samaroon way almost 10 year ayay soo xukumeen somaliland qolyaha kalana wuu iman markoodu.
Adigu hadee hadee waxaa ku walaataa isku qabiil baanu nahay iyo harti iyo nacnac hadana sharaf iyo mansab toona kuma haystaan. Dhulbahante marhore ayuu idinku fahmay munaafaqadii iyo yaa reer hebelaay UF ayay idiin yidhaahdeen, warsangeli ayaa hoosta idinkaga Nabnaa oo aad been iyo awrkacsi munaafaqaysan ku waasheen iyagiina waa fahmeen munaafaqadiinii iyo inaad xaabo ka dhigataan Xabada Iidoor kkkkkk.
Ma xasuusataa waxa ku samayseen kii gudoomiyaha ku magacownaa macal askartiisii la laayey isagiina sida foosha xun loo bahdilay, weliba markasta warsengali waa Target marar badan waa ku dulmiseen Tuula Gadhoowe, kuwii dhawaan la eryeyna wayba u badnaayeen, warsengeli marka la doonayana Waa Xaabo la shito xabada kulul Iidoor laysaga dhigo,marka doonana lagu tacadiyo xilka ay hayaana uu marwalba noqdo ka sidii doono laga yeelo kkkkkkkkkkkk.
Hadase awrkacsigii iyo munaafaqii si fiican ayay u fahmeen waana kuwaa dalkoodii Iska kusoo noqonaya diiwaangelintuna si mugweyn ayay ugu soo baxeen.
Eri Boowe lays barey haysku dayin inaad ka dhex kaluumayasto Reer somaliland Hadeee waxa tahay waa la yaqaan Hade hada dhidhibso kkkkkk